पल र आँचलको सहयोग या हतारो ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentपल र आँचलको सहयोग या हतारो ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली रंग पत्रकारहरुका लागि आइतबार र सोमबारको दिन तछाडमछाडमा वित्यो । करिब १० मिनेटमै फेरिएको ब्रेकिङ न्यूजले पत्रकारलाई हतारो पर्नु स्वभाविक नै थियो । ब्रेकिङ न्यूज १० मिनेटमा फेर्न सफल कलाकार थिए, अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री आँचल शर्मा ।
मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्न ठिक्क भएको फिल्म विर विक्रम २ को दशै लगतै गरिएको शुभसाइतमा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ कोर्ट र पाइन्टमा सजिएका थिए । ब्यान्ड बाजा नै बजाएर आकाशलाई स्वागत गर्दा मिलनले उनीमाथि आशा पनि उस्तै राखेका थिए । तर, सिनेमाको मुहुर्त सकिएको २ हप्ता नवित्दै आकाशले फिल्म छाडेका थिए । आकाशले हजुरबुबाको स्वास्थ्यलाई फिल्म छाड्नुको मुख्य कारण बनाए ।
आकाशले सिनेमा छाडेको समाचार ब्रेक गरेर सुस्ताएका पत्रकारलाई फेरि यो सिनेमामा अभिनेता पल शाह जोडिएको खबरले ततायो । पल शाहलाई निर्देशक चाम्सले संझौता गरेको तस्बिर बाहिरिसँगै ब्रेकिङ न्यूज फेरियो । अभिनेता पल शाह एक्कासी विर विक्रममा जोडिनु अचम्मको कुरा थियो । किनकी, ७ महिना पहिले सत्रु गते गरेपछि लामो सुस्केरा हालेर फिल्म रोज्न नहतारिएका पल एक्कासी विर विक्रममा किन जोडिए भन्ने प्रश्न सबैतिर आउने नै भयो ।
निर्देशक चाम्सले पलले यसपटक आफूलाई सहयोग गरेको बताए । समस्यामा परेको बेलामा पलले सहयोग गरेर नेपाली फिल्मकर्मीलाई नै राम्रो सन्देश दिएको भावानात्मक भनाई पलको थियो । पलले विर विक्रम २ खेलेर मिलनलाई साथ दिएको त हो, अब दर्शकलाई धोका दिन्छन् या खुशी बनाउँछन्, सिनेमा रिलिजपछि भन्न सकिएला । तर, पलको काम गर्ने यो तरिका भने सबैलाई लागि अचम्मित पार्ने नै थियो ।
पल शाहले विर विक्रम २ मा संझौता गर्नुभन्दा ठिक १ दिन अघि अभिनेत्री आँचल शर्माले पनि यस्तै शैलीको काम गरेकी थिइन् । किरण केसीले आज शुभसाइत गरेको दाल भात तरकारी फिल्म अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले छाडेपछि यसको टिम अलमलमा थियो । यो समयमा आँचलले पनि छोटो समयका नै सिनेमाको अफर स्विकार गरिन् । आँचलले सिनेमाको अफर स्विकार गर्दा उनको प्रशंसा भन्दा आलोचना नै बढी भयो । किनकी, उनले यो टिमको सत्रु गतेमा काम गर्दा फाइदा नभएको आशयको बयान दिइसकेकी थिइन् ।
पल र आँचल यसपटक फरक सिनेमामा देखिन लागेका छन् । दुई अलग भएपनि उनीहरुको काम गर्ने तरिका उस्तै देखियो । पल र आँचलले २ निर्मातालाई अन्तिम समयमा सहयोग गरे या हतारो गरे भन्ने टिप्पणी अहिले नै गर्नु मुर्खता होला । तर, पल र आँचलले सत्रु गते गरेपछि जे बोलेका थिए, उनीहरुको काम गराई भने त्यसको विपरित ध्रुवमा देखिएको छ ।
मालालाई गर्मी लाग्यो
May 19, 2019 sutraentertainment Gossip, Kollywood, News 0
अभिनेत्री माला लिम्बुले पुरानो बुलेटमा काम गरेकी थिइन् । पुरानो बुलेट उनको फिल्मको करिअरमा दोश्रो फ्लप फिल्म भयो । फिल्म नचल्नुमा उनको हात मात्र नरहला । तर, फिल्म चलेको भए माला लिम्बुलाई अरु मेकरले पनि […]